Walaac laga muujiyey carruuro la waayey markii laga soo laabtay fasixii xaggaaga | Somaliska
Walaac laga muujiyey carruuro la waayey markii laga soo laabtay fasixii xaggaaga
Markii laga soo laabtay fasaxii xaggaga ayaa xafiiska arrimaha bulshadda waxaa soo gaaray walaac ay soo gudbiyeen iskuulo ku yaala Göteborg, halkaasoo carruuro dhigan jirtay aaneey dib ugu soo laaban goobihii waxbarashadda. Tani waxeey abuurtay walaac la xirriira in qaarkood loo kaxeeyey si qasab ah dalka dibadiisa.
Degmadda Angered oo ka mid ah degmooyinka ay ku badan yihiin ajaanibta, ayaa iskuuladda hoose dhaxe iyo sare-ba laga soo gudbiyey walaac carruuro aan dib u soo laaban. Sidaasi si la mid ah waxaa degmadda Lundby ee Hisingen iyadana laga soo gudbiyey labbo dacwo oo amuurtaas la xirrriirta.
“Waxaanu u aragnaa ineey tahay dhibaato weyn, waana mid ay ka muuqatay sida aan u da daalnay ka hor intaan iskuuladda la furin. Waxaanu sameeynayo olol, waxaanu dirnay fariimo aan ku sheegeeyno waxa macalinka sameeynayo haddii uu arko kursi fasalkiisa kamid ah oo firaaqo ah. Markaa ka dibna waxaa ina soo gaaray dacwooyin ah walaac ah” ayuu yiri Makael Kurdali Jonsson oo ah mid kamid ah madax xafiisyadda xafiiska arrimaha bulshadda ee Angered.
Dhinca kale guud dalka oo dhan ayaa waxaa la runsan yahay in 127 carruur ah la weeysan yahay, inkastoo aan la heeeyn tiro koob rasmi ah hadana hey’adda qaranka ee dhinca taleefanada ka saacida dumarka dhibaateeysan oo sanadkii 2014-kii la furay ayaa la sheegay in 127 carruur ah oo dhalinyaro u badan la waayey kuwaas oo da’doodu ka hooseeyso 18. Hey’adda ayaa sidoo kale sheegtay in kooxdan la waayey ay u muuqtato qorshe la dejiyey ka hor intaan si qasab ah dalka looga dhoofin. Iskuuladda dalkana waa meesha ugu muhiimsan ee islamarkiiba laga tebo dhalaanka sida qasabka ah loo dhoofiyo.
Kowii bishii sibteember ee sanadkan ayey xilka la wareegtay Katarina Idegård, oo ah isku duwaha ka hor taga tacadiga iyo dilka ee ku saleeysan dhowrista sharafta ee magaaladda Göteborg. Waxaa ay sheegtay in dalka qeybo badan la xirriirta haatan ay qaadayaan talaabo ay kaga hortagayaan falalka nooca dil sharafeedka ku dhisan. Ugu dambeeyntiina afar iyo toban dhacdo oo ku saleeysan tacadi sharafeedka ayaa waxaa dhawaan wargeyska GP soo bandhiga, waxaana gobolka ku howlan yahay baaritaan amuurtan la xirriirta.
Maamulka Göteborg oo codsaday in dib loo soo celiyo dhaqaalihii ku baxay mashruucii xarrunta geela ee Göteborg
Waqtiga oo la badali doono